LA Plaza de Cultura y Artes Meksikan Amerikana Amerikana any Los Angeles
Etazonia California Los Angeles
LA Plaza de Cultura y Artes Meksikana American Museum
LA Plaza de Cultura y Artes any Los Angeles
LA Plaza - LA Plaza de Culturas y Artes ao amin'ny arabe Olvera any Los Angeles. Sary © 2011 Kayte Deioma, licensed to About.com
LA Plaza de Cultura y Artes , fantatra kokoa amin'ny hoe LA Plaza , dia tranombakoka ara-kolontsaina natokana hitantara ny tantaran'ny Meksikana tany Los Angeles sy ny evolisiona ary ny fandraisan'ny kolontsaina Meksikana any an-tanàna. Noho ny faka ny tanàna, dia mahagaga fa noraisina hatramin'ny 2011 ity foibe ara-kolontsaina ity. Fanampiana fanampiny ho an'ny Latino Landmarks ao LA sy ny tahirin- kolontsaina momba ny kolontsaina ao Los Angeles.
LA Plaza dia miorina ao amin'ny trano roa lehibe ao amin'ny trano biriky Vickrey-Brunswig 1888 sy ny Trano Plaza 1883 ao amin'ny Monument Historic Historic Site ao El Pueblo de Los Angeles. Ireo trano ireo dia mifanila amin'ny La Placita Church, manerana ny Main Street avy amin'ny gazetiboky sy ny tsenan'ny Meksikana any amin'ny Olvera Street, mpizahantany malaza. Ny fidirana ao amin'ny tranom-bakoka dia ao ambadiky ny trano fohy, lavitra ny arabe. Ny campus koa dia misy sehatra sy zaridaina ety ivelany.
Na dia eo amin'ny teny Espaniola aza ny anaran'ny tranombakoka dia ny traikefa Amerikana Meksikana sy Meksikana any Los Angeles dia tsy misy afa-tsy amin'ny teny Anglisy ihany.
Ireo zavakanto manan-tantara avy amin'ireo mpanjanaka tany Los Angeles no naseho tao amin'ny LA Plaza Museum. Sary © 2011 Kayte Deioma, licensed to About.com
Ny rihana voalohany dia mandamina ny fotoana. Ao amin'ny fampiratiana LA Starts Here! , tantara an-tsoratra, tantara an-tsarintany, ary fampisehoana an-tserasera dia mampiditra anao amin'ireo olona 44 nokaramain'ny zanabola Espaniôla ao Espaina 1781 hipetraka ao Los Angeles. Ireo fianakaviana 11 tany am-boalohany dia fantatra amin'ny antontan-taratasy manan-tantara tahaka ny Indio, Mulato, Español, Negro, ary Mestizo. Avy amin'ireo fakantsary maro samihafa ara-kolontsaina, ny tantara dia mamadika ny tantaran'i Los Angeles avy any Old Mexique ho fampandrosoana, ary avy amin'ireo mpifindra monina voalohany amin'ny mpifindra monina vaovao.
Ny tantaran'ny meksikana sy meksikana Amerikana, fianakaviana ary vondrom-piangonana izay nandray anjara tamin'ny fivoaran'ny tanànan'i Los Angeles dia nasongadina. Voces Vivas dia andian-dahatsary misy andian-tsarin'ny Meksikana Amerikanina avy amin'ny lalam-piainana rehetra milalao amin'ny sehatra maromaro. Ilaina ny mijanona mba hijery ny sasany amin'ireo lahatsary, fa ny zava-misy izay milalao an-tsambokely dia miteraka kakofony manelingelina, ka mahatonga azy ireo mafy ny hifantoka amin'ny horonan-tsary na amin'ny famakiana ireo fampiratiana hafa.
Ireo olo-malaza notsongaina tao anatin'ilay horonan-tsary dia ahitana ny mpilalao Edward James Olmos sy i Carmen Zapata, minisitry ny raharaham-bahiny amerikana, Hilda Solis, mariachi Jose Hernandez ary ny namako Anthony Morales, filoham-pianakavin'ny Gabrieleno / Tongva Indians avy any San Gabriel, izay nialoha ny Meksikana ireo razambe .
Anisan'ny lohahevitra hafa ny Meksikana Amerikanina sy ny kolontsaina Meksikana amin'ny atleta amerikana malaza sy meksikanina malaza toa an'i Richard "Poncho" Gonzales sy Luis Dodger Fernando Valenzuela.
Ampio ny tantaranao
Azonao atao ny manampy ny video, sary, na tantara ho an'ireo Meksikana Amerikanina ao amin'ny Mosaika Interactive Los Angeles ao LA Plaza any Los Angeles, CA. Sary © 2011 Kayte Deioma, licensed to About.com
Ny mozika amin'ny tontolon'ny môtô dia mamela anao hijery tantara, saripika ary horonan-tsary avy amin'ireo meksikana amerikana mendrika ao amin'ny arisiva. Azonao atao ny mandray anjara amin'ny tantaran'ny Meksikana Amerikanina any Los Angeles amin'ny fampidirana ny tantaranao na ny sary ao amin'ny arisivan'ny digital. Misy fomba maro hanaovana izany.
Ny LA dia manomboka eto! horonan-tsary ao ambadiky ny rindrin'ny orana eo amin'ny gorodona voalohany dia ahafahanao manoratra horonantsary iray eo amin'ilay toerana izay ahazoana mivantana ny mozika. Raha te haka ny fotoanao ianao ary hanampy zavatra lalindalina kokoa, afaka manendry fotoana hiditra ao amin'ny Centro Yo Soy ambony ambony ianao mba hanoratana ny tantaranao ary handraisanao dika mitovy amin'ilay video.
Raha manana tantara ara-tantara na sary tianao hampidirinao ao amin'ny arisiva ianao, dia afaka miditra ao amin'ny Flickr ao Flickr ao Flickr ao amin'ny flickr.com/groups/laplazala ary alefaso ny sary ao amin'ny tahiry.
Fomba iray hafa hanangonan'i LA Plaza tantara ao amin'ny tarehintsoratra 140 ao amin'ny kaonty Twitter @LAPlazaLA. Araho ny @LAPlazaLA ary valio ny fanontaniana amin'ny tenifototra mifandraika amin'izany ary ny bitsika nalefanao dia ho tafiditra ao amin'ny tantara mitohy.
Ny Exhibition La Calle Principal indray dia mamerina ny fivarotana manan-tantara ao amin'ny Main Street ao LA Plaza any Los Angeles. Sary © 2011 Kayte Deioma, licensed to About.com
Amin'ny ambaratonga ambony, ny La Calle Principal dia mamorona lalam-barotra mini iray misy karazany fivarotana ho an'ny ankizy sy olon-dehibe mba hijery. Azonao atao ny manandrana akanjo maromaro ao amin'ny Tranompen'ny Main Street na ny sary nalainao tao amin'ny trano fandraisam-peo. Fantaro ny toerana niavian'ny sakafo tao amin'ny Mercado Plaza , mifototra amin'ny tsena Meksikanina manana tranokala malaza izay teraka tao Main Street. Henoy ny mozika Meksikana tamin'ny taona 1920 sy 30 ary hianatra momba ny teknolojia mozika amin'ny fotoana ao amin'ny Repositorio Musical Mexicano , na hanadihady ny vaovao sy literatiora Espaniôla any Los Angeles ao Libraria Lozano . Manana ny kianjany manokana ny Calle Principal, izay ahafahan'ny mpandahateny miditra anaty savony mba hizara ny heviny rehefa mahita ny fetran'ny fahalalahana miteny.
Best Hotels in Beverly Hills for Couples Romantic
Foreign Exchange Exchange any Los Angeles
Top 6 Los Angeles Indoor Shopping Malls & 1
Fialantsasatra any anaty valam-pirenena ao amin'ny Seven Flags Magic Mountain 2017-18
Sarin'ny Universal Studios Hollywood
Sarintany Alexandria Virginia sy Directions
Ny Fetiben'ny Nasionaly Cherry Blossom
Top Pubs any Irlandy any Londres
Zavatra tsy fantatrareo izay azonao atao any Disneyland
Ny Tour de France 2016
Fialantsasatry ny Fiarahamonina Frantsay tamin'ny taona 2016
Columbia, Maryland Fahaefatry ny volana Fevriye Jolay 2017
Ahoana ny fomba hanomanana ny Dia Trip Montserrat avy any Barcelona
Fikarohana ny manodidina an'i San Francisco any atsinanan'i Bay
Araka ny hitan'ny maso: The Hunger Games - Mockingjay Movie Locations
Miresaha amin'ny rindrina miaraka amin'ny goTenna Mesh
Toeram-pialan-tsasatra Bed And Breakfast ao Etazonia sy Kanada